Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Bhuku 2
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (South Africa) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2
Unoda mazano okuti iwe unogonawo kuvimba nawo! Bhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2, rinopa mazano akadaro. Bhuku rino rinosanganisira zvakataurwa nevechiduku vakawanda pasi rose. Mazano anoshanda ari muBhaibheri akavabatsira. Iye zvino ona kuti anogona kukubatsirawo sei.
Bhuku rino richakubatsira kupindura mibvunzo ine chokuita ne:
Unogona kukopa bhuku iri paPDF, kana kukumbira bhuku rakadhindwa nokunyorera hofisi yedu. Cherechedzai Kuti: PDF yebhuku iri yava kukwanisa kuita kuti unyore pane dzimwe nzvimbo. Kana mudziyo waunoshandisa uine software inoita kuti ukwanise kunyora paPDF, unogona kunyora zvaunofunga uye mhinduro dzako mubhuku racho.